Umsebenzi we-actor awukona nje kuphela, kodwa futhi uyingozi. Leli nyanga uNyota Maria Kozhevnikova wenza izintambo zakhe zivelele.
Esifundisweni sikaMaria Kozhevnikova kwakukhona isithombe somdlali we-actress, okubonisa ukuthi ihlombe elifanele lenkanyezi yinto eqhuma phambili. Singacabanga ukuthi lo ngumsebenzi wokwenza ama-artists: manje ama-Masha asusiwe kule filimu mayelana nekamu lokuhlushwa laseSobibor.
Mhlawumbe, ukwakheka okunjalo kusetshenziswe kwesinye seziqephu. Nokho, uKozhevnikova wamemezela ngokushesha ukuthi lokhu akuyona ukwakheka:
Ngandlela-thile kanjalo ...
PS Futhi lokhu akuyona ukwakheka
Abalandeli be-Instagram uMaria Kozhevnikova bakhathazeka ngesimo se-actress
Isiqingatha sehora kuphela kwakwanele ukwenza abalandeli bakaMaria besabe. Ngeshwa, inkanyezi ayisabonanga imininingwane, ngakho abalandeli baqala ukuhumusha izinguqulo ezihlukahlukene, bexoxa ngezinto zakamuva:
i-anastasia_nikitskaya Unayo iplatelet yegazi enhle? Lokhu kwenzeka uma behla kakhulu
massage ye-veronikavizental noma i-vacuum
suvorovaelena379 I-Red Lupus Erythematosus
Akmalov.i Ngombono wami kunalokho akuzange kuhlelwe kahle
i-natali_mur33 iyashisa ngokusuka emithonjeni) kusuka intombazane yomoya wokuvivinya umzimba, njalo njalo ezinyaweni nasezingalweni zakhe
annaberg_art Njengemuva kokusikhipha lokhu kwenzeka
suslichestvo Kusobala ukuthi into ethile yachotshozwa ngesandla. Lokhu kwenzeka uma kukhona okuthile okucindezela isikhathi eside.
tigradcom_ Kwenzeka ((ngokusobala kwawa kakhulu ((
Abasebenzisi be-Instagram babuza uMaria Kozhevnikova ukuthi acacise isimo bese etshela ukuthi kwenzekani esandleni sakhe:
seduna32 Maria, ufuna ukuletha wonke umuntu lapha ekuhlaselweni kwenhliziyo? I-show ibonise, futhi kwenzekani, akhenge athi igama, wonke umuntu lapha uyaziqhenya ngokungaziwa, ngakho awukwazi ....
Silence Kozhevnikova ngokuya ngokukhathazeka ababhalisile bakhe. Ezingxoxweni mayelana nesithombe abazama ukukunikeza iseluleko se-actress ukuthi ungasusa kanjani izivunguvungu ngokushesha futhi unciphise ubuhlungu:
alla_1512 Oooohoo! Ngokushesha esitolo sezidakamizwa for badyagi kanye masilkami
ayashkina Thola kahle, amafutha avela kumivimbo nemivimbo, mhlawumbe usizo.
U-Alika Smekhova ake akeke ukuthi uyamzonda uTatiana Navka, ividiyo
Ukuhlola kwe-DNA kubonise ukuthi uProtekho Chaliapin akayena uyise wengane ka-Anna Kalashnikova
Imithetho yokushisa kwelanga ephephile nendlela yokugcina umthunzi okhangayo unomphela
Umama wathola umphefumulo wakhe womshado
Amazinyo amhlophe ekhaya
I-pizza nge inkukhu ebhemayo kanye nehhashi
U-Ani Lorak wadedela "uShady Lady" oyedwa
Leggings kaStas Kostyushkin yabangela ukukhwabanisa kuwebhu
Isitokisi "I-Dragon's Breath"
Imisedari enezimbewu ze-poppy
Mangaki amahora kufanele kube khona iphupho eliphilile?